အိန္ဒိယ - ယုံကြည်မှုနှင့်ဘုရားများ ခရီးသွားသတင်း
Carmen Guillen | | အိႏၵိယ, အာရှခရီးသွားခြင်း
အိႏၵိယ လူ ဦး ရေအရကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအရဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်သည် 1,320.900.000 ကလူ သန်းခေါင်စာရင်း။ တရုတ်နောက်ကွယ်မှ။ အနှစ်တစ်ထောင်ယဉ်ကျေးမှုပုဏ္ဏားအိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ရှေးအကျဆုံးလူသိများသောဘာသာစကားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာတရားများနှင့်အတွေးအခေါ်နည်းလမ်းများ၏ရာစုနှစ်များစွာမတူညီသောလူမျိုးစုများနှင့်လူမျိုးစုများနေထိုင်ရာအတူတကွနေထိုင်ရန်၊ ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောဤဆောင်းပါး၌သင့်အားသူတို့ယူဆောင်လာပါမည် "ယုံကြည်မှုနှင့်ဘုရား" ပြီးတော့မနက်ဖြန်ထုတ်ဝေမယ့်သူတွေထဲကတစ်ခုမှာမင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအစဉ်အလာများနှင့်ပွဲတော်များကိုသင်နှင့်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါတို့ဝတ်စားဆင်ယင် ဆာရီနနွင်းနှင့်သဲသစ်သားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုရေမွှေးနှင့်ထူးခြားသည့်အရောင်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်သည့်နတ်ဘုရားများ၏နိုင်ငံဖြစ်သည်။
2 Meenakshi ဘုရားကျောင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်
အိန္ဒိယသည်အာရှတိုက်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဘာသာတရားနှစ်ခု၏ပုခက်ဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ။ သို့သော်သေးငယ်သည့်လူ ဦး ရေတွင်အခြားအဓိကအားဖြင့်ဤအဓိကနှစ်ခုနှင့်ရှေးဟောင်းဆစ်ခ်နှင့်ဂျိန်းဝါဒကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင်အရေးပါမှုအရဟောင်းနွမ်းလျက်ရှိသည်။ ခရစ်ယာန်များ၊ ဂျူးများ၊ မူဆလင်များ၊
ဤကြီးမားသောဘာသာရေးကွဲပြားမှုများရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးကိုပေါင်းစည်းစေသောစည်းလုံးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့သည်လူများ၏ဘ ၀ တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါဆိုသင်ပြောနိုင်ပါတယ် ဘာသာတရားကိုအိန္ဒိယလူ ဦး ရေ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်တွေ့ရသည်။
ဟိန္ဒူဝါဒဟူသောဝေါဟာရကို ၁၉ ရာစုမတိုင်မီကစတင်ထွန်းကားခဲ့သော်လည်းဘီစီ ၁၅၀၀ တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထာဝရဥပဒေ o 'sanatanadharma'။ ထာဝရဥပဒေသည်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် "ဗီဒက်" သူ၏ဥာဏ်ပညာကိုပြသဘယ်မှာလေးပါးစာအုပ်များဖြစ်ကြသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဟိန္ဒူဘာသာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကိုင်းအခက်များက၎င်းကိုစဉ်းစားသည် အဖြစ်မှန်တစ်ခု illusory ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ် (မာယာ)
ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းကိုယုံကြည်သည် စိတ်ဝိညာဉ်၏ဝင်စားသို့မဟုတ် transmigration y Karma ၏တရား.
တတိယအချက်အနေဖြင့်ဟိန္ဒူဘာသာသည်မျှော်မှန်းသည် တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်လျက်ရှိ၏လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ငျးကှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိ (ဗြဟ္မာ) နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရောက်ရှိရန်အတွက်။
La နွားမ ၎င်းကိုမြေကြီး၏မိခင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမြေသြဇာကောင်းသောသင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဒါဟာဟိန္ဒူဘာသာအတွက်မြင့်မြတ်သည်။
၏လုပ်ရပ် နွားမကျွေးပါ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ရှုမြင်သည် မမ.
အ တိရိစ္ဆာန်များယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် မြင့်မြတ် သူတို့၏ဘုရားဗြဟ္မာသည်သူတို့၌တည်းနေသောကြောင့်တည်း။
'Mukti မရှိပါ' ၎င်းသည်လူ၏ဝင်စားခြင်းသံသရာမှလူကိုလွတ်မြောက်စေသည်။
''Karma-Sansara 'ဤအရာသည် ၀ ိညာဉ်များဝင်စားခြင်း၏အစဖြစ်သည်။
ဒီဘာသာတရားဟာအိန္ဒိယမှာဘီစီ ၆ ရာစုမှ ၅ ရာစုအတွင်းဟိန္ဒူဘာသာအပြင်ထပ်မံမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဤအယူဝါဒသည်ဘဝဆင်းရဲဒုက္ခများကိုအထူးအလေးထားပြီး၎င်းမှမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမတရားအားထုတ်ရန်လောကတွင် ၀ င်ရောက်ရန်တရားရုံးတွင်သူ၏ဘဝကိုစွန့်ခွာခဲ့သည့်မင်းသားတစ်ပါး
သူ၏အယူဝါဒသည်ထိုအယူအဆအပေါ်အခြေခံသည် အားလုံးဖြစ်တည်မှုနာကျင်မှု - ထုတ်လုပ်သည်; ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ရန်ဗုဒ္ဓက၎င်းအားဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်း - အသက်ရှင်လိုသောဆန္ဒနှင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအချို့ကိုပိုင်ဆိုင်လိုသောအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားရန်အဆိုပြုထားသည်။ ဤရိုးရှင်းသောနိယာမများကိုတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ ဒီဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ Nirvana လို့ခေါ်တဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးဖို့လိုတယ်။
El Meenakshi ဘုရားကျောင်း ဒါဟာထဲမှာတည်ရှိပါတယ် မက်ဒရစ်မြို့, တမီလ်နာဒူးတွင်ရှေးအကျဆုံးနှင့်သမိုင်းအရရှေး ဦး 2.600 နှစ်ကျော်နှင့်အတူ။ ဒဏ္legာရီအရသန့်ရှင်းသောရေသည်မြို့တော်တည်ရှိရာနေရာ၌ဘုရားသခင် Siva မှကျဆင်းသွားပြီးထိုနေရာမှ "nectar city" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော Madurai ဟူသောအမည်ကိုရရှိသည်။
ဒီဗိမာန်က ဘုရားသခင် Siva ၏လှပသောဇနီး Meenakshi ကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ ၁၆ ရာစုမှ ၁၇ ရာစုအတွင်းရှိ Dravidian ဗိသုကာလက်ရာမြောက်သောဗိသုကာလက်ရာအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်တွင်အမြင့် ၄၅ မှ ၅၀ စင်တီမီတာအကြားမျှော်စင် ၁၂ ခုရှိသည်။ သူတို့ကိုဘုရား၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဒဏ္myာရီပုံပြင်များအရအလွန်အသေးစိတ်ရောင်စုံရုပ်ပုံများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏မျှော်စင်များသည်မတူညီသောအချိန်များမှဖြစ်ပြီးအရှေ့ဘက်တွင်ရှေးအကျဆုံး (၁၃ ရာစု) နှင့်တောင်ဘက် ၁၆ ရာစုတို့ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအဝှမ်းမှထောင်နှင့်ချီသောဝတ်ပြုသူများကိုလက်ခံရယူပါအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဂီတ၊ အနုပညာ၊ အခန်းအတွင်း၌ကော်လံထောင်ပေါင်းများစွာ၏အခန်းတစ်ခုစီရှိပြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူဘဲထူးခြားပြီးအသေးစိတ်ပုံစံဖြင့်ထွင်းထုထားသည်။
ဒီဘုရားကျောင်းတည်ရှိပါတယ် သန့်ရှင်းသော Amritsar မြို့မှာ။ ၎င်းကို Sikk ဘာသာရေးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သော Ram Das ကတည်ထောင်ခဲ့သည် ရာစု XVI.
လှပသောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် လှလှပပထွင်းထုစကျင်ကျောက်, အရာရွှေအရွက်၏အရွက်လိုက်နာခဲ့ကြသည်။ ဤအဆောက်အ ဦး ၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ရေများကြောင့်ကုစားနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသည်ဟုဆိုသောရေကန်တစ်ခုနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ဘေးတွင်ရှိသည် ဂုရု Ka Langarနေ့တိုင်းဘုရားဖူးသွားသူများအားအခမဲ့အစားအစာများကျွေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » အိန္ဒိယ - ယုံကြည်ချက်နှင့်ဘုရားများ
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မည်သည့်နိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာခြင်းကိုတားမြစ်ထားသနည်း။